Akhriso: Qodobbada Dastuuriga Ah Ee Lagu Eedeeyey Farmaajo Inuu Ku Xad Gudbey – Goobjoog News
Mooshinka xil ka qaadista madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ee axaddii shalay uu qabtay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa xildhibaannada mooshinka keenay waxaa ay xuseen qodobbo dastuurka federaalka ah ku jira oo ay sheegeen inuu ku tuntay ama ku xad-gudbay madaxweyne Farmaajo.
Haddaba, Goobjoog News, waxaa ay akhristayaasheeda la wadaageysaa qodobbada ay soo qaateen oo faah-faahsan.
(1). Waxaa ay qoreen inuu ku xad gudbey qodobka 36aad ee dastuurka federaalka ah: Qodobka 36aad farqadiisa 1aad iyo 2aad ee Dastuurka Federaalka ayaa xeerinaya in isucelinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha dhexmari kara Jumhuuriyadda Soomaaliya iyo Dowlad kale ay ku dhici karto oo kaliya si waafqsan sharciga iyo in uu jiro:
b) Heshiis isu-celin ah oo ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya Dawladda Federaalka Soomaaliyeed celinta eedaysanaha ama dembiilaha.
t) In ay ahaataa mid waafaqasan dhaqanka iyo qaanuunka caalamiga ah, waana in Baarlamaanka Federaalka ah soo saaraa sharciga lagu maamulayo isucelinta dembiilayaasha.
(2): Inuu ku xad gudbay qodobka 10aad iyo 35aad ee dastuurka federaalka ah, haddii aan qodobadan faah-faahinno.
waxaa mooshinka ku jirtay, waxuu Madaxweynaha si aan ganbasho lahayn ugu xadgudbay qodobka 10aad ee dastuurka farqadiisa 1aad, 2aad iyo 3aad, oo dhamaantood tilmaamaya ilaalinta karaamada aadanaha iyo in aan marna awoodda dowladda loo isticmaalin meel uga dhicida karaamada aadanaha.
Qodobka 10aad: Karaamada Aadanaha: (1). Karaamada aadanuhu waa deeq Ilaahey Subxaanahu wa tacaalaa ku mannaystay qof kasta oo Banii’aadan ah, xuquuqda aadanahuna deeqdaas ayey ka dhalataa (2). Karaamada Aadanaha waa laguma-xadgudbaan, dhawristeeduna waa waajib saaran dadka oo dhan.
Waxaa kale oo la sheegay inuu madaxweynaha ku tuntay qodobka 35aad ee dastuurka ee si cad u qeexaya ilaalinta xaquuqda eedeysanaha, qaas ahaan. In aan qofna lagu qasbi karin dembi-qirasho. In mudo 48 saac gudahooda lagu horgeeyo maxkamad awood u leh. In xaaladdiisa la gaarsiiyo qoyskiisa ama eheladiisa. In Eedeysanaha aan lagu hayn karin goob aan sharcigu bannayn iyo xaqa uu u leeyahay in uu qabsado qareen difaaca.
QAYBTA 2AAD: Ku xadgudub Xeerka Habka Ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana la soo qaatay Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi dhagax) iyo qodobka 36aad ee dastuurka
Qodobka 36aad: Isucelinta eedeysanayaasha: (1). Isucelinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaa lagu oggolaan karaa oo keliya si waafaqsan sharciga, iyo in uu jiro heshiis isu-celin ah oo ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya Dawladda Federaalka Soomaaliyeed celinta eedaysanaha ama dembiilaha.(2) isucelinta eedaysanaha iyo dembiilaha waa in ay ahaataa mid waafaqasan dhaqanka iyo qaanuunka caalamiga ah, waana in Baarlamaanka Federaalka ah soo saaraa sharciga lagu maamulayo isucelinta dembiilayaasha.
Inuu k u xad gudbay qodobka 87aad, faqradiisa 2aad (Astaanta midnimada qaranka), 90aad, faqradiisa (c, J, q), 109A IYO 111A EE DASTUURKA FEDERAALKA:, Heshiisyada uu la galay madaxda Itoobiya iyo Eretrea.
Qodobka 90aad, faqradiisa (c, J, q) waa sidan:
(J).Wuxuu magacaabaa Taliyeyaasha Ciidammada Heer Federaal iyo ka qaadista xilalkooda, markii ay soo jeediyaan Golaha Wasiirradu,.
(C).Wuxuu magacaabayaa jagooyinka sare ee Xukuumadda Federaalka iyo madaxda Hey’adaha Dawladda Federaalka, marka uu soo jeediyo Golaha Wasiirradu.
(Q). Wuxuu guddoonsiiyaa abaalmarinta Xushmada Qaranka markuu Golaha Wasiirradu soo jeediyo.
(b) Go’aamiyaa mushaharka iyo lacagta hawlgabka ee garsoorayaashaa;
Qodobka 111 A. Golaha Adeegga Garsoorka:
QAYBTA 4AAD Ku xadgudub Mabaadi’da Federaalka, duminta dowlad goboleedyada iyo abaabulka dagaalo sokeeye, iyaga oo soo qaatay QODOBADA 50AAD, 51AAD, IYO 53AAD EE DASTUURKA FEDERAALKA.
6. KU XADGUDUB QODOBKA 127AAD EE DASTUURKA FEDERAALKA
(1) Waa in ay Ciidammada Amniga dhawraan mabaadi’da soo socota:
1) Darajo dhimis sarkaal waxay imaanaysaa marka uu ku dhaco xukun maxkamadeed oo ka badan 3 sano.
8. KU XADGUDUB QARAARAADKA GOLEYAASHA BARLAMAANKA
Cawad “Ma Aqoonsanin Guddiga Miisaaniyadda Ee Golaha Shacabka” (Dhageyso)
Cawad "Ma Aqoonsanin Guddiga Miisaaniyadda Ee Golaha Shacabka" (Dhageyso)